၅၀၅(က) ဖြင့်တရားစွဲခံထားရသူ ညီမ အေးဝတ်ရည်သောင်းကို အမှု့ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလိုက်လို့ ပျော်ရွှင်နေတဲ့ နှင်းဝတ်ရည်သောင်း…. – Cele Oscar
၅၀၅(က) ဖြင့်တရားစွဲခံထားရသူ ညီမ အေးဝတ်ရည်သောင်းကို အမှု့ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလိုက်လို့ ပျော်ရွှင်နေတဲ့ နှင်းဝတ်ရည်သောင်း….
June 30, 2021 By L YC Knowledge
ပရိတျသတျကွီးရေ မအေးသောငျးလို့ အမြားက ခဈြစနိုး ချေါကွတဲ့ သရုပျဆောငျ မငျးသမီးခြော အေးဝတျရညျသောငျး က တော့ တျောလှနျရေး တိုကျပှဲ ကွီးမှာ ပွညျသူတှေ ဘကျက ရပျတညျခဲ့ တာကွောငျ့ ၅၀၅ က ဖွငျ့ အမှုဖှငျ့ အရေးယူခွငျး ခံထားရတဲ့ အနုပညာရှငျ တှထေဲ က တဈဦး လညျး ဖွဈပါတယျ..။ဇှနျလ(၂၉) ရကျနေ့ ညမှာတော့ ပုဒျမ ၅၀၅ က ဖွငျ့ အမှုဖှငျ့ တရားစှဲခံ ထားရတဲ့ အနုပညာ ရှငျ (၂၄) ယောကျ ကို အမှု့ ပွနျလညျ ရုတျသိမျးပေးလိုကျတဲ့ အကွောငျး စဈကောငျစီ ရဲ့ သတငျးဌာန တှကေ ထုတျပွနျ ကွညောခဲ့ပွီး အဲ့ဒီအထဲ မှာ မအေးသောငျး ကလညျး ပါဝငျ လာပါတယျ..။
​အဆိုပါ သတငျးကွောငျ့ ကာယကံရှငျ မိသားစုဝငျ တှအေပွငျ ပွညျသူ ပရိသတျတှေ က ပါ ဝမျးသာနေ ကွပွီး ညီမဖွဈသူ မအေးသောငျး အတှကျ နှငျးဝတျရညျသောငျးကလညျး ဝမျးသာနရေ တဲ့ အကွောငျး စာလေးရေး ကာ ပွောပွလာပါတယျ..။“I am so happy finally she is home . Home time baby. Home time .love you su ma 😍😘🌷💐..” “Su maaaaaaa . Ma g is so happy 😘😍..” ဆိုပွီး ညီမ ဖွဈသူအတှကျ အပြျောလေးတှေ ကို ရေးသားပွောပွထားတာ ဖွဈပါတယျ..။
ညီအဈမ သုံးယောကျ ထဲက အငယျဆုံးလေး ဖွဈတဲ့ ဆှိဝတျရညျသောငျး ကလညျး အဈမအတှကျဝ မျးသာသလို အားလုံး အတှကျလညျး ဝမျးသာ နရေတဲ့အကွောငျးကို ပွောပွ ထားပါသေးတယျ..။သူမ တို့ ရဲ့ပို့ဈအောကျ မှာ တော့ ပရိသတျတှေ ကလညျး မအေးသောငျး နဲ့ အတူ အမှုပွနျလညျ ရုတျသိမျးခံရတဲ့ အခွားအနုပညာရှငျ တှအေတှကျ ဝမျးသာ နကွေတဲ့ အကွောငျးတှေ ကို လညျး မှတျခကျြ တှေ ပေးထား ကွတာ တှရေ့ ပါတယျ..။
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ မအေးသောင်းလို့ အများက ချစ်စနိုး ခေါ်ကြတဲ့ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချော အေးဝတ်ရည်သောင်း က တော့ တော်လှန်ရေး တိုက်ပွဲ ကြီးမှာ ပြည်သူတွေ ဘက်က ရပ်တည်ခဲ့ တာကြောင့် ၅၀၅ က ဖြင့် အမှုဖွင့် အရေးယူခြင်း ခံထားရတဲ့ အနုပညာရှင် တွေထဲ က တစ်ဦး လည်း ဖြစ်ပါတယ်..။ဇွန်လ(၂၉) ရက်နေ့ ညမှာတော့ ပုဒ်မ ၅၀၅ က ဖြင့် အမှုဖွင့် တရားစွဲခံ ထားရတဲ့ အနုပညာ ရှင် (၂၄) ယောက် ကို အမှု့ ပြန်လည် ရုတ်သိမ်းပေးလိုက်တဲ့ အကြောင်း စစ်ကောင်စီ ရဲ့ သတင်းဌာန တွေက ထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့ပြီး အဲ့ဒီအထဲ မှာ မအေးသောင်း ကလည်း ပါဝင် လာပါတယ်..။
​အဆိုပါ သတင်းကြောင့် ကာယကံရှင် မိသားစုဝင် တွေအပြင် ပြည်သူ ပရိသတ်တွေ က ပါ ဝမ်းသာနေ ကြပြီး ညီမဖြစ်သူ မအေးသောင်း အတွက် နှင်းဝတ်ရည်သောင်းကလည်း ဝမ်းသာနေရ တဲ့ အကြောင်း စာလေးရေး ကာ ပြောပြလာပါတယ်..။“I am so happy finally she is home . Home time baby. Home time .love you su ma 😍😘🌷💐..” “Su maaaaaaa . Ma g is so happy 😘😍..” ဆိုပြီး ညီမ ဖြစ်သူအတွက် အပျော်လေးတွေ ကို ရေးသားပြောပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်..။
ညီအစ်မ သုံးယောက် ထဲက အငယ်ဆုံးလေး ဖြစ်တဲ့ ဆွိဝတ်ရည်သောင်း ကလည်း အစ်မအတွက်ဝ မ်းသာသလို အားလုံး အတွက်လည်း ဝမ်းသာ နေရတဲ့အကြောင်းကို ပြောပြ ထားပါသေးတယ်..။သူမ တို့ ရဲ့ပို့စ်အောက် မှာ တော့ ပရိသတ်တွေ ကလည်း မအေးသောင်း နဲ့ အတူ အမှုပြန်လည် ရုတ်သိမ်းခံရတဲ့ အခြားအနုပညာရှင် တွေအတွက် ဝမ်းသာ နေကြတဲ့ အကြောင်းတွေ ကို လည်း မှတ်ချက် တွေ ပေးထား ကြတာ တွေ့ရ ပါတယ်..။
နောက်ဆုံးသူမအတွက် ရေးပေးခဲ့တဲ့ သီချင်းလေးကို ဝမ်းနည်စွာဖြင့် အမှတ်တရသီဆိုပြလာတဲ့ မေ ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်…